प्रदेशमा निर्णायक भूमिका : कांग्रेसको हातमा ‘सत्ताको बागडोर’ – NepalNewsTv | The Daily Star of Nepal
२०७७, १३ पुष सोमबार २०७७, १३ पुष सोमबार
नेताहरु भन्छन्, ‘राजनीति सम्भावनाको खेल हो, यहाँ जे पनि हुनसक्छ ।’ यो भनाइ नेपाली राजनीतिमा धेरैपटक चरितार्थ भएको छ । राजनीतिमा प्राय नसोचेका घटना घट्छन् । अप्रत्यासित फेरबदल हुन्छन् । पछिल्लो समय यस्ता थुप्रै घटना भएका छन् । एक्कासि प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि बिहानसम्म सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा गरिरहेका मान्छे साँझ मन्त्री बने । प्रदेशको चुनावमा हारेकाले पनि मन्त्री खाए । के यी कल्पनीय थिए ? पक्कै थिएनन् । त्यसो भए राजनीतिमा जे पनि सम्भव छ ? नेपालको परिपक्षमा हो भन्न सकिने धेरै आधार छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनताका फर्कौ । स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्यो । तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणुलाई जिताउन चितवनमा पतपत्र च्यात्नेसम्मका हर्कत भए । जसमा कांग्रेसले आँखा चिम्लियो । अन्तत रेणुले जितिन् ।
तर देशभर माआवादीले अपेक्षाकृत सफलता पाएन । फेरि अर्को खेल सुरु भयो । नभन्दै संघ र प्रदेश सभाको चुनावमा उसले कांग्रेसँगको गठबन्धन मात्रै तोडेन, नेकपा एमालेसँग एकता गर्ने योजनाका साथ गठबन्धन गर्यो । नजिता अपेक्षित आयो । एमाले–माओवादीको गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाइ मत पायो । सरकार बनायो । पार्टी एकता पनि भयो ।
लामो समयसम्म सत्ताको वरिपरि रहेको कांग्रेस नराम्ररी पराजित भयो । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बाध्य भएर पाँच वर्ष प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने अवस्था आयो । सभापति शेरबहादुर देउवाले बेलाबेला सत्तासँगै मिलेर भाग लिएको आरोप लागे पनि पाँच वर्षभित्रै सत्तामा जाने कुनै सम्भावना थिएन । जनचाहना पनि होइन ।
तर, कम्युनिष्टहरु आकस्मिक रुपमा एक भएका थिए, त्यसैगरी अलग पनि भएका छन् । ऐतिहासिक जनमत भएको सत्तारूढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको छ । सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाका मुख्यमन्त्री छन् । उनीहरु अस्तित्व रक्षाको संघर्षमा छन् । हिजो केपी ओलीसँग एउटै मन्त्रिपरिषद्मा भएका नेताहरू आज सडकमा नारा लगाउने अवस्थामा छन् ।
माथि भनिएजस्तो राजनीति सम्भावनाको खेल हो । अहिले फेरि सत्ता कांग्रेसकै वरिपरि घुमिरहेको देखिन्छ । संघमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ । यदपि अदालतमा मुद्दा विचाराधिन रहेकोले पुनस्थापित हुने झिनो आसा बाँकी नै छ । आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले अविस्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको हो ।
प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित भए के हुन्छ ?
ओलीइतर समूहले पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ । यसको स्पष्ट संकेत हो प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित हुनेवित्तकै प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउने । त्यसो भए के दाहाल–नेपालसँग सरकार बनाउन बहुमत छ त ? अह ! छैन । त्यसो भए सरकार कसरी बन्छ ? उनीहरुले बहुमत कहाँबाट ल्याउँछन् ?
स्वभावतः विकल्प विपक्षी दल नै हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस छ । हुनत मधेश केन्द्रित दलसँग पनि जनमत छ । सरकार बनाउन यसले पनि भूमिका खेल्न सक्छ ।
अब सरकार बनाउन उसको भूमिका नै महत्ववूर्ण हुने छ ।
अब सरकार बनाउन दाहाल–नेपाल पक्षले मात्रै होइन प्रधानमन्त्रीको कुर्सी जोगाउन केपी शर्मा ओलीले पनि गुहार्ने यिनै दुई पक्षलाई हो । यिनीहरुले जसलाई साथ दिए उसैको सरकार बन्नेछ ।अर्थात प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित भएको अवस्थामा कांग्रेस जहा ढल्क्यो उसैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था आउने देखिन्छ । यो त सम्भावनाको कुरा भयो । प्रतिनिधि सभा पुनस्थापित हुने नहुने पक्का छैन । तर प्रदेशमा भने कांग्रेस निर्णायक मोडमा छ ।
प्रदेश २ मा नेकपा प्रतिपक्षमा रहेका कारण त्यहाँ सरकार फेरबदल हुने देखिएको छैन । नेकपा सरकार रहेको ६ प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म सुदूरपश्चिममा मात्रै दाहाल नेपाल पक्षको स्पष्ट बहुमत छ । तर राजनीति हो भन्न सकिन्न, यताका उता हुन बेरलाग्दैन । त्यसो भएको खण्डमा सुदूरुपश्चिम सरकार पनि धरापमा पर्नेछ । प्रदेश १ र कर्णालीमा अहिलेलाई दाहाल–नेपालसँग बहुमत देखिन्छ । तर स्पष्ट छैन । बाँकी प्रदेशमा त कुनै पक्ष स्पष्ट बहुमतमा छैन ।
बागमतीमा र प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ । अधिकांश प्रदेशमा सरकार टिकाउन र नयाँ बनाउन कांग्रेसको साथ चाहिने देखिएको छ । कांग्रेसले समर्थन नगरे कतिपयमा परिस्थिति जटिल बन्ने अवस्था छ ।
बागमती प्रदेशमा कांग्रेसको साथ जसलाई हुन्छ उसले नै सरकार बनाउनेछ ।
गण्डकी र लुम्बिनीमा ओली पक्ष, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा दाहाल–नेपाल पक्ष बलियो देखिए पनि अन्य राजनीतिक दलको साथबिना सरकार टिकाउन र नयाँ बनाउन गाह्रो देखिन्छ ।
बागमतीमा दाहाल–नेपाल पक्षलाई बहुमत पुर्‍याउन थप ११ जना प्रदेशसभा सदस्यको साथ चाहिन्छ ।
साना दल र स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य गरी ८ जनाले साथ दिए पनि संख्या पुग्दैन । दाहाल–नेपाल पक्षले सरकार बनाउन कांग्रेसको साथ चाहिन्छ । ओली पक्षलाई २१ जना प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन चाहिन्छ । कांग्रेसको साथबिना मुख्यमन्त्री पौडेलले सत्ता टिकाउने सम्भावना न्यून छ ।
कर्णालीका दुई सांसद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेसँगै कर्णाली सरकार अल्पमतमा परेको छ । यससँगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही प्रदेशसभामा अल्पमतमा परेका छन् । प्रदेश सरकार जोगाइराख्न वा नयाँ सरकार गठन गर्न दुवैमा कांग्रेस निर्णायक हुने देखिएको छ ।
प्रदेश १ मा दाहाल–नेपाल समूहले सरकार परिवर्तन गर्न सक्रियता बढाएको छ । ओली समूह सरकार र पार्टी दुवैमा कमजोर देखिए पनि सरकारमा टिक्ने उपायको खोजीमा देखिन्छ । मुख्यमन्त्री राई कांग्रेस र अन्य दलका सांसदसँग जोडिएर आफूलाई टिकाउने तयारीमा जुटेका छन् । यद्यपि, दाहाल–नेपाल समूहलाई प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व गर्न सहज देखिन्छ ।
गण्डकी र लुम्बिनीको अवस्था पनि फरक छैन । नेकपाकै एउटा पक्षले साथ छोड्नेवित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ । तर दुबै पक्षसँग एकल रुपमा सरकार बनाउन बहुमत छैन । यहाँ पनि कांग्रेसकै भूमिका अहम हुनेछ ।
यस विषयमा कांग्रेसको आधिकारिक धारणा भने आइसकेको छैन ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसले देशभर प्रदर्शनको तयारी गरेको छ । संघमा कांग्रेस सरकारको कदमविरुद्धमा देखिन्छ । प्रदेशमा भने कांग्रेसका प्रदेश संसदीय दलले नै प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् । प्रदेश सरकार अल्पमतमा पर्दै गएपछि सम्भवतः यस विषयमा कांग्रेसले कुनै निर्णय गर्ला ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको २०७७, १३ पुष सोमबार २०७७, १३ पुष सोमबार 157 Viewed
भारतीय नेताले भने– अब नेपालसँगको सम्बन्धमा सुधार आउने छ
मुख्यमन्त्री पोखरेलको टिप्पणी: सर्वोच्चको फैसलाले अस्थिरता ल्याउने भयो
चुनावको नाममा अनावश्यक खर्च नगर्न निर्वाचन आयोगलाई प्रचण्ड माधव पक्षको सुझाव
संविधानको संरक्षण गरे मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छः वरिष्ठ नेता पौडेल
महेश वस्नेतविरुद्ध स्टाटस लेखेपछि पक्राउ परेका चन्दलाई रिहाइ गर्न कांग्रेसको माग